विरलै म एक सफल व्यक्तिलाई भेट्छु जसको पछाडि केही विनाशकारी विफलता हुँदैन। धेरै बर्षमा मैले मेरो सफलतालाई भन्दा अधिक मापन गर्न सिकेको छु। म सफल छु किनकि मैले २ शानदार बच्चाहरू पाएको छु जसलाई म अविश्वसनीय रूपमा गर्व गर्छु र जो मेरो उमेरमा मेरा उपलब्धीहरू भन्दा बढि राम्रो देखाइरहेका छन्।
मेरो जीवनलाई फर्केर हेर्दा, यद्यपि म विश्वास गर्दछु कि मेरो सफलता मेरो असफलताको कारणले आएको छ - उनीहरूको बाबजुद होइन। मैले सुन्दर र colorful्गीन ईतिहास पाएँ र धेरै नराम्रो निर्णय गरे, तर5बर्ष भन्दा अघि मैले ध्यान केन्द्रित गर्न छोडेको थिएँ र आफुलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। मा नराम्रो र म के हुँ भनेर पत्ता लगाउन थाले मा महान। मैले मेरा कमजोरीहरूको आलोचना गर्नुको सट्टा मेरो कौशलतालाई राम्रोसँग सिकाउन सहयोग गर्ने मान्छेहरूसँग आफूलाई घेरा गर्न थालें।
म अहिले भाग्यशाली छु बढ्दो कम्पनी चलाउन मद्दत गर्नका लागि जुन मैले मूल व्यवसाय योजनाहरू निर्माण गर्न मद्दत गरें। म अझै धनी छैन, न त मलाई त्यस्तै भएकोमा मतलब छ। मेरो परिवार अझै अपार्टमेन्टमा बस्छ। मैले प्रत्येक payday मा छोडेको कुनै पनि पैसा मेरो छोराको पढाइमा जान्छ वा नयाँ उद्यममा लगानी हुन्छ। जब सम्म मेरो खुसी परिवार र मेरो टाउको मा छाना छ, म एक खुसी मान्छे हुँ!
कुनै पनि युवा व्यक्तिलाई मेरो सल्लाह भनेको तपाईको सामर्थ्यहरू के हो र तपाईको स्थिति वा अवसरहरूबाट टाढा बस्न कसरी सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्, र जति नै चाँडो तपाईंले खुशी पाउनुहुनेछ। खुशी संग सफलता आउँछ।
तपाईंले अरूलाई प्रेरणा दिन तपाईं महान हुनुहुन्छ भनेर उल्लेख गर्न बिर्सनुभयो। यो, मेरो नजरमा, एक शानदार सम्पत्ति हो, किनकि कसैले यसलाई लुटमा तपाईंबाट खोस्न सक्दैन, कुनै विनाशकारीले यसलाई पगाल्न वा बुलबुला जस्तै पप गर्न सक्दैन ...
महान पोस्ट! साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद Otir, तपाईं एक अद्भुत दयालु व्यक्ति हुनुहुन्छ।
म जीवनमा जे पनि गर्न सक्छु भनेर भनिएको जवान व्यक्तिको रूपमा मलाई स्पष्ट रूपमा याद छ। र जब मेरो वरिपरि सबै सकारात्मक र उत्साहजनक थिए; मेरो बललाई कसरी बजार योग्य सीपमा परिणत गर्ने र कमजोरीको स्थितिबाट कसरी बच्ने भन्ने बारे मलाई मार्गदर्शन गर्न र निर्देशन दिन कसैले पनि सक्षम भएन।
एक जवान रूपमा; म एक अन्तर्मुखी थिएँ र आजको दिनसम्म मैले आफ्नो करियरको खातिर नेटवर्किङ र रणनीतिक सम्बन्धहरू बनाउने चुनौती पाएँ।
मेरो जीवनलाई फर्केर हेर्दा; मलाई लाग्दैन कि मैले धेरै ठूलो असफलताहरू पाएको छु किनभने मैले ठूलो सफलताको परिणाम हुन सक्ने कुनै पनि ठूलो मौका कहिल्यै लिएको छैन।
डग, मलाई धेरै सोच्न दिनुभएकोमा धन्यवाद।
स्कट, तपाईलाई धेरै स्वागत छ! तपाईं एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ - कुनै पनि कुराले तपाईंलाई रोक्न नदिनुहोस्।
जब देखि मैले तपाईलाई पहिलो पटक भेटेको थिएँ, तपाईले मलाई सधैं र पहिलो अप्रत्याशित रूपमा मेरो लागि प्रेरणाको रूपमा सेवा गर्नुभएको छ। म पक्का छु कि त्यहाँ धेरै छन् जसले मलाई यसमा दोस्रो हुनेछ।
र, एक साँझ चाँडै, हाम्रो देशको लागि तपाईंको सेवाको लागि धन्यवाद!
धेरै धेरै धन्यवाद जुली! मेरो सेवा आजकल हाम्रा पशु चिकित्सकहरूको तुलनामा केकको टुक्रा थियो।
यो चाखलाग्दो छ कि तपाईंले "आगो द्वारा परीक्षण" मार्फत पत्ता लगाउनुभयो कि कसैको बललाई पूंजीकरण गर्नु कम्तीमा पनि खुशीको कुञ्जीहरू मध्ये एक हो।
वैज्ञानिकहरू पनि यस्तै निष्कर्षमा पुगेका छन्। तपाईंले "खुशी" को यस धारणामा उत्तेजित भिडियोहरू र लेखहरूको श्रृंखला फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ.